Warshadda Firdhisan - Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha
ultrasonic viscous dhoobada isku darka slurry homogenizer
Codsiga ugu weyn ee kala firdhinta ultrasonic ee warshadaha slurry waa in la kala qaado oo la sifeeyo qaybaha kala duwan ee dhoobada dhoobada. Xoogga ah ee 20,000 jeer halkii labaad ee ay soo saarto gariirka ultrasonic wuxuu yareyn karaa cabirka qaybaha kala duwan ee saxarka iyo xoqida. Yaraynta cabirku waxay kordhisaa aagga xiriirka ee u dhexeeya jajabyada xiriirkuna waa dhow yahay, taas oo si weyn u kordhin karta adkaanta xaashida, waxay u badan tahay in la caddeeyo oo laga hortago astaamaha iyo burburka. Xiinka waa ...
Shiinaha Xiiniinyaha dharka dharka ultrasonic
Codsiga ugu weyn ee ultrasonic homogenizer ee warshadaha dharka ayaa ah kala firdhinta dharka dharka. Mawjadaha Ultrasonic ayaa si deg deg ah u kala jajaba dareerayaasha, agglomerates iyo iskudhafyada oo ay kujiraan 20 kun oo gariir ilbidhiqsigiiba, sidaasna ku sameysma kala firidhnaan isku mid ah dheeha. Isla mar ahaantaana, jajabyada yaryar ayaa sidoo kale ka caawiya dheeha inuu dhex galo daloolada fiber ee dharka si loo gaaro midabeyn dhakhso leh. Awoodda midabka iyo xawaaraha midabka ayaa sidoo kale si weyn kor loogu qaaday. QAYBAHA: MUUQAALKA JH1500W-20 ...
mashiinka kala firidhsan warqad ultrasonic
Codsiga ugu weyn ee ku faafitaanka ultrasonic ee warshadaha waraaqda waa inuu kala firdhiyo oo sifeeyo qaybaha kala duwan ee saxarka waraaqda Xoogga 20,000 jeer halkii ilbidhiqsi ee ay soo saarto gariirka ultrasonic wuxuu yareyn karaa cabirka qaybaha kala duwan ee saxarka. Yaraynta cabirku waxay kordhisaa aagga xiriirka ee u dhexeeya jajabyada xiriirkuna waa dhow yahay, taas oo si weyn u kordhin karta adkaanta xaashida, waxay u badan tahay in la caddeeyo oo laga hortago astaamaha iyo burburka. Faahfaahinta: ADVANTA ...
Soo saarista Ultrasonic waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha casiirka iyo cabitaanka si looga soo saaro maaddooyinka wax ku oolka ah sida pectin iyo midabka dhirta. Gariirka Ultrasonic wuxuu jebin karaa darbiyada unugyada dhirta, taasoo u oggolaaneysa pectin, midabada dhirta iyo qeybaha kale inay u dareeraan dheecaanka. Isla mar ahaantaana, ultrasound-ka wuxuu sii wadaa inuu shaqeeyo si uu u kala firdhiyo pectin-ka loona beero qaybo yaryar oo midabbo yar yar leh. Qaybahaas yaryar ayaa si siman oo xasiloon loo qaybin karaa casiirka. Stabi ...
20Khz mashiinka kala firidhsan nanotube carbon
Carbonnanotubes waa kuwo xoogan oo jilicsan laakiin aad iskugu xidhan. Way adagtahay in lagu kala firdho dareereyaasha, sida biyaha, ethanol, saliida, polymer ama epoxy resin. Ultrasound waa hab wax ku ool ah oo lagu helo kala-sooc - hal-firidhsan - kaarboonnootubes. Carbonnanotubes (CNT) waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo, daahannada iyo polymerka iyo sida koronto ahaan loogu buuxiyo balaastigga si loogu kala diro qarashyada taagan ee qalabka korantada iyo korontada si toos ah rinjiyeyaasha jirka baabuurta. Isticmaalka nanotu ...
20Khz midabka ultrasonic daahan midabka mashiinka kala firdhiso
Kala firdhinta Ultrasonic waa nidaam farsamo si loo yareeyo walxaha yar yar ee dareeraha ah si ay si isku mid ah u noqdaan kuwo yaryar oo siman loo qaybiyo. Marka mashiinnada kala firdhiya ee ultrasonic loo isticmaalo inay noqdaan kuwo isku mid ah, ujeedadu waa in la yareeyo walxaha yaryar ee dareeraha ah si loo wanaajiyo isku midnimada iyo degganaanta Qaybahaas (kala firdhi wajiga) waxay noqon karaan adkaansho ama cabitaanno. Hoos udhaca dhexroorka celceliska qaybaha wuxuu kordhiyaa tirada shakhsiyaadka shakhsiga ah. Tani waxay keeneysaa yareynta aver ...
qalabka isku dhafka emulsion ultrasonic wax
Wax emulsion wuxuu leeyahay adeegsiyo kala duwan, waxaa lagu dari karaa qalab kale si loo hagaajiyo waxqabadka qalabka. Sida: em emulsion wax ayaa lagu daraa rinjiga si loo wanaajiyo ku dhejinta rinjiga, em emulsion wax ayaa lagu daraa waxyaabaha la isku qurxiyo si loo wanaajiyo saameynta biyuhu ay leeyihiin ee waxyaabaha la isku qurxiyo.Si loo helo emulsions wax, gaar ahaan emulsions nano-wax, xoog xiirashada-sare ayaa loo baahan yahay . Diyaaradda micro-jet ee xoogga leh ee ka dhalata gariirka ultrasonic waxay dhex geli kartaa qaybaha si loo gaaro gobolka nanometer, ...
Qalabka silsiladda Ultrasonic silica
Silica waa qalab dhoobada isku dhafan. Waxay leedahay dahaadhka korantada, xasiloonida kuleylka sare, iyo iska caabbinta. Waxay hagaajin kartaa waxqabadka qalabka kala duwan. Tusaale ahaan: Ku darista silica lakabyada waxay si weyn u wanaajin kartaa adkeysiga abrasion ee lakabka. Cavitation Ultrasonic wuxuu soo saaraa goobooyin yaryar oo aan tiro lahayn. Xumbooyinkan yaryar ayaa sameysma, kora oo u kala baxa dhowr mowjado. Nidaamkani wuxuu soo saari doonaa xaalado maxalli ah oo aad u daran, sida xoog xiirid xoog leh iyo microjet. The ...
Qalabka loo yaqaan 'Ultrasonic tattoo inks' qalabka kala-baxa
Tattoo-ga loo yaqaan 'Tattoo inks' wuxuu ka kooban yahay midabyo isku dhafan oo lagu rakibo kuwa xambaara waxaana loo isticmaalaa sawirka. Tattoo Tattoo wuxuu isticmaali karaa midabyo kala duwan oo ah khadadka tattoo-ga, waa la qasi karaa ama la qasi karaa si loo soo saaro midabyo kale. Si loo helo muuqaal cad oo midab tattoo ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu kala firdhiyo midabka midabka si isku mid ah oo xasiloon. Kala firidhida Ultrasonic ee midabbo waa hab wax ku ool ah. Cavitation Ultrasonic wuxuu soo saaraa goobooyin yaryar oo aan tiro lahayn. Xumbooyinkan yaryar ayaa sameysma, kora oo u kala baxa dhowr mowjado. T ...
Qalabka wax soo saarka nanoemulsions Ultrasonic
Nanoemulsions (CBD emulsion emulsion, Liposome emulsion) ayaa sii kordheysa loo adeegsadaa warshadaha caafimaadka iyo caafimaadka. Baahida weyn ee suuqa ayaa kor u qaaday horumarinta farsamada wax soo saarka nanoemulsion ee hufan. Tikniyoolajiyadda diyaarinta nanoemulsion Ultrasonic waxay caddeysay inay tahay habka ugu wanaagsan xilligan. Cavitation Ultrasonic wuxuu soo saaraa goobooyin yaryar oo aan tiro lahayn. Xumbooyinkan yaryar ayaa sameysma, kora oo u kala baxa dhowr mowjado. Nidaamkani wuxuu soo saari doonaa xaalado maxalli ah oo aad u daran, sida xoog ...
Qalabka kala firidhsan Ultrasonic Graphene
Sababtoo ah sifooyinka aan caadiga ahayn ee graphene, sida: xoog, adkaanta, nolosha adeegga, iwm Sannadihii ugu dambeeyay, graphene wuxuu noqday mid aad iyo aad u ballaaran loo isticmaalo. Si loogu daro graphene waxyaabaha isku dhafan oo kaalinteeda laga ciyaaro, waa in lagu kala firdhiyaa nanosheets shaqsiyeed. Heerka sare ee deagglomeration, ayaa si aad ah u muuqda doorka graphene. Ultimate vibration wuxuu ka adkaadaa van der Waals xoog xoog xiirid ah oo ah 20,000 jeer ilbiriqsi, sidaas darteed pr ...
Qalabka kala firidhida Ultrasonic
Midabbada ayaa loo kala firdhiyey rinjiga, dahaadhka, iyo khaanadaha si loo bixiyo midab. Laakiin inta badan iskudhisyada biraha ee midabbada, sida: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 waa walxo aan milmi karin. Tani waxay u baahan tahay qaab wax ku ool ah oo firidhsan si loogu kala firdhiyo qalabka u dhigma. Tiknoolajiyadda firidhinta Ultrasonic ayaa hadda ah habka ugu wanaagsan ee lagu kala firdhiyo. Cavitation Ultrasonic wuxuu soo saaraa aagag cadaadis sarreeya oo sarreeya oo dareeraha ah. Kuwani aagagga cadaadiska sare iyo kuwa hoose waxay si isdaba joog ah u saameeyaan par adag ...